Faarax Sheekh C/qaadir oo soo jeediyay in xubin lagu darro tirada oday dhaqameedka (CADEYN) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faarax Sheekh C/qaadir oo soo jeediyay in xubin lagu darro tirada oday dhaqameedka (CADEYN)
Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo jeediyay arrinta ah in xubin lagu kordhiyo tirada odayaasha dhaqanka Soomaalida oo dhawaantaan shirka madasha ee Muqdisho ka dhacay lagu go’aamiyay inay tiro ahaan noqdaan ilaa 135 oday.
Oday dhaqameedyadaasi ayaa ah kuwa soo xulli doonno baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, balse arrintaan ayaa u muuqata mid sharci darro ah oo kusoo beegantay xilli dalka uu ku jiro kala guur islamarkaana ay doorashada dalka kusoo fool-leedahay.
Warar hoose ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in sababta uu Faarax Sheekh C/qaadir arrintaan u sameynayo ay tahay kadib markii uu loolan dhinaca kursiga xildhibaanimada beesha Reer Aw-xasan ah kala kulmay nin magaciisa lagu sheegay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo isna isla beeshaasi kasoo jeeda.
Arrintaan ayaa sidoo kale waxay keentay in shirar kala duwan ay magaalada Muqdisho ku yeeshaan madaxweyne Xasan Sheekh, guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Jawaari, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo kan Jubbaland Axmed Madoobe.
Shirkaasi kadib ayaa dhamaan madaxdaasi waxay la isla garteen in la abuuro oday dhaqameedyo cusub oo ay yeelato Beesha Reer Aw-Xasan, taas oo fikirkeedu lahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Warqad qoraal ah uu ku saxiixan yahay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa lagu sheegay in beesha Reer Aw-Xasan ay yeelato laba oday, iyadoo suldaankii hore Suldaan Maxamed Cabdi Cumar uu hoggaamin doono kaliya howlaha la xiriira doorashada kursiga xildhibaanimo ee Beesha reer Aw-Xasan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Sidoo kale nabadoonka cusub ee Maxamed Axmed Xuseen (Shurki) oo uu wato xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir ayaa isna dhinaciisa hogaamin doono kursiga xildhibaanimo oo ay beesha Reer Aw-Xasan ka heleeyso gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, iyadoona wadarta guud ee odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee soo xulli doona xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ay noqon doonaan ilaa 136 odayaal dhaqameed.
Si kastaba ha ahaateee, ilaa iyo haatan lama oga in guddiga doorashada heerka federaalka ah ay arrintaan yeeli doonaan iyo inkale, iyadoona tani ay keeni karto inay waddo cusub u furto beelaha kale ee Soomaaliyeed in dhinacoodane loogu soo daro guddiga odayaasha dhaqanka ee loo xil saaray soo xulidda baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya.
We will die in our shops, vow Somali traders in Pretoria
Fidel Castro Left Mark on Somalia, Horn of Africa